Warbixin: Maxaa kala heysta xukuumadda R/W Kheyre iyo warbaahinta bulshada? - Caasimada Online
Home Warar Warbixin: Maxaa kala heysta xukuumadda R/W Kheyre iyo warbaahinta bulshada?
Warbixin: Maxaa kala heysta xukuumadda R/W Kheyre iyo warbaahinta bulshada?
Muqdisho (Caasimada Online) – Saameynta Warbaahinta ee Bulshada ayaa lagu tilmaamaa awooda ugu sareysa ee ay adeegsadaan dawladaha caalamka ka jira maanta si ay u helaan taageerada Bulshada ugana hortagaan mucaaradka iyo dhaliilaha dadweynaha.
Adeegsiga warbaahinta awgeed dawlada M. Farmaajo iyo RW Khayre waxey ku guuleysatay arimo ay ku fashilmeyn dawladihii ka horeeyey sida;
1. In ay doorashadii kaga guuleystaan Madaxweynihii iyo Ra’salwasaarihii hore oo heystay awooda iyo dhaqaalaha dalka iyo Musharaxiintii kale ee la tartameysay.
2. In ay helaan taageeradii Bulshada ee ugu badneed dawladihii nasoo maray.
3. In loo arko dawladii ugu wadani-saneed ee soo marta dalka kadib Kacaankii October.
4. In loo arko dawlad ay shacabku leeyihiin oo aan laga laheen dibadda.
5. In Barlamaanka iyo Kutlooyinkiisa mucaaradku ka baqaan la-xisaabtanka iyo Mooshinada Xukuumada, kadib markii ay derbi difaac ka dhigteen Shacabka iyo Saxaafada.
6. In dhammaan Wasiirada Khayre ay khubaro ku yihiin adeegsiga Facebook-ga iyo Twitter-ka, lamana oga in lagu tababaray ama ay horey u yaqaaneen oo shuruud looga dhigay magacaabistooda.
7. In Ingineerka dawlada uu yahay Saxafi ku xeel-dheer adeegsiga Warbaahinta.
8. In ay ku guuleytaan taageerada 90% hay’adaha iyo shirkadaha warbaahinta dalka iyo suxufiyiinta, lana gaarsiiyo in ay hoos u hadasho warbaahinta Mucaaradku.
9. In dawlad-gobaleedyadii ku dhiiran-jiray hanjabaada dawladihii hore ka baqaan taageerada shacabka iyo saxaafada dawladaan.
10. In dawladihii shisheeye ee fara-gelinjiray dalka ka gaabsadaan dawladaan inta ay haysato saxaafada iyo shacabka.